Naannoon Tigraay niitoorkii bilbilaa mataa ishee hundeeffatte! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNaannoon Tigraay niitoorkii bilbilaa mataa ishee hundeeffatte!
Sadaasa 11/20/2020 Naannoon Tigraay niitoorkii bilbilaa mataa ishee hundeeffatte!
Torban lamaan darban keessa ajaja koloneel Abiy Ahmadiin Tigraay tajaajila niitoorkii akka hin arganneef kan dhoorkamte yoo taatu har’a garuu tajaajila mataa ishee jalqabdee jirti;gargaarsa Tigiraayiifi qorrattoota saybar niitoorkiin akka hojii jalqabu ta’eera.
Akka sila ibsineetti ajaja koloneel Abiy Ahmediin tajaajilli niitoorkii Tigiraay keessaa hojiin ala akka ta’ee ture.amma garuu dhaabbata Hiwawie akka addunyaatti beekkamaa kan ta’ee waliin hojjechuun gara hojiitti deebi’eera. Kana jechuun immoo Tigiraay telecom industry mataa ishee akka dhaabbachuu dandeessu ragaa dha jedhaniiru .
Kan hojii isaa jalqabee jiru Tigray telecom suuta suutaan guddachaa babal’achaa akka deemu kan gabaafame ta’uu isaa fi ammaaf bakkoota muraasa keessa qofatti akka inni hojjetu godhamee jira.
Ammaaf tajaajilli isaa Tigraay keessatti qofa hojjeta kanaan duras humni ibsaa Tigraay hojii isaa akka jalqabu kan godhame ta’uu isaa ni yaadatama.kush miidiyaa niitoorkii irraa
Obboleessa koo Barsiisaa Gaalib Abbaa Saambii eda rasaasa 4 dhahanii du’eera jedhanii bosona keessatti gatan. Namoonni bosona keessaa arganii hospitaalaa Jimmaa geessan. Ammas lubbuun hafuun isaa shakkisiisaa jedhan. Murni abbaa irree kun akkana gochuudhaan qabsoo Oromoo waan dhaabu se’a. Maatii koo hunda fixxanii anas asitti dhuftanii na ajjeesuu dandeessu. Qabsicha garuu hin dhaabuu hin dandeessan. Ana callisiisuuf jecha maatii koo miskiina irratti xiyyeeffachuun keessan bineensummaa keessan ragaa baha malee humna isiniif hin dabalu. Anas karaa kanaan callisiisuu yoo yaaddaniif sun abadan hin tahu. Qabsoo kanaaf maatii ofii itti dhabuun anaan hin jalqabne, anaanis hin dhaabbatu. Oromiyaan cubbuu kana hunda irraa bilisa bahuun waanuma hin oolle.
Waan ajaaibaati kunille Bakka lolli irraa jalqabe hin beeku. Garuu lolchiisaa dha. Birhanuu juulaa dhugumatti nama akkamtu biyya tana hooganaa jiraan nama dhiba
Qubsa Sole says:
Looli amma demma jiru kun barbaahiisa mitti Abiy Ahmed aangoo issa dheerefachuuf kana hunda dalagaa jiraa tanaaf jachaa waan tanaa waltanee Abiy angoorraa fonqoilchuu qabna.